Laminate Flooring (Wooden Texture Series)
2.5mm High Quality Vinyl Flooring- ဗီနိုင်းကြမ်းခင်း
14000 ~ 24000 Kyats
အလွယ်တကူအစင်းရာမထင်နိုင်ခြင်း၊ တာရှည်ခံခြင်း၊လမ်းလျှောက်သောအခါ အသံလုံခြင်း၊ ဈေးနှုန်းသက်သာပြီးလှပသေသပ်ခြင်း၊ အလွယ်တကူသန့်ရှင်းနိုင်ခြင်း။ Customer များအတွက် အမျိုးမျိုးသောအရောင်အဆင်းများနှင့် ဒီဇိုင်းများရရှိနိုင်ပါတယ်။ကြမ်းခင်းများကိုအဆင်သင့် ခင်းနိုင်ပြီး Polish တင်ဖို့လည်းမလိုပါဘူး။ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းသင့်တော်ပါတယ်။ ကြမ်းခင်းများကိုခြောက်သွေ့ပြီးချောမွေ့သောနေရာများတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
လှပသေသပ်သော Clip Type Vinyl Flooring (4mm) - ဗီနိုင်းကြမ်းခင်း
17500 ~ 23000 Kyats
• Super peeling strength • Excellent surface flatness and smoothness • Weather, corrosion and pollutant resistance • Ink Adhesion Properties • Impact resistance • Light weight and easy to process • Easy to maintain
Hotel, Restaurant, Public area သုံး သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် လုံခြုံရေးသုံးပစ္စည်းများ
Hotel များ၊ Restaurant များနှင့် Public area များအတွက် သန့် ရှင်းရေးသုံး ထရော်လီများ၊ လုံခြုံရေးသုံး ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ကြမ်းပြင် သန့် ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများ စသည်တို့ အပြင် သန့် ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာတွင် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော Diversey အမှတ်တံဆိပ် ဓာတုထုတ်ကုန် များကို IKON MART တွင် တစ်နေရာတည်းဖြင့် စုံလင်စွာရရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒါ့အပြင် အဆောက်အဦ ထိန်းသိမ်းရေး နည်းစနစ်များကိုလဲ လမ်းညွှန်ပြသပေးခြင်း၊ လက်တွေ့ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခြင်းများဖြင့်လဲ ၀န်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်.... IKON MART ကို ဆက်သွယ်လိုပါက E Mail :[email protected] သို့ လည်းကောင်း၊ ဖုန်းနံပါတ် 01-534216, 01527705, 01501429 ကိုလည်းကောင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ IKON MART is well equipped with complete lines of housekeeping trolley, floor care and safety equipment along with relevant Diversey Care chemicals for hotel rooms, restaurant and other public areas. Refreshment training provided on site for practical application of materials and technology for the state of the art building maintenance system.
Thamasanda ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အိမ် ၊ အဆောက်အဦး ၊ ရုံးခန်းများ နှင့် ဆိုင်များ တွင် ကြာရှည် အသုံးခံပြီး အရည်သွေးကောင်းမွန်ပြီး အကြမ်းခံသော Laminate Flooring များကို ဂျာမနီ နိုင်ငံမှ တင်သွင်း ပြီး ရောင်းချ လျက်ရှိပါသည်။ ၄င်း Laminate Flooring များသည် အလွှာလေးလွှာ ဖြင့် ဖွဲ့ စည်းထား ပြီး ပထမဦးဆုံး အလွှာသည် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ခံနိုင်မှု့ ကို အလွန်အမင်း အကျိုးပြု ပါသည်။ ၄င်း Laminate Floor သည် ၈၄ % သစ်သားြ ဖင့်ပြုလုပ်ထား ပြီး သဘာဝ အပူ ချိန်အတိုင်းအတာဖြင့်ထုတ်လုပ် ထားသောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အတွက် သက်သောင့် သက်သာ ရှိပြီး နွေးထွေး ဇိမ်ကျ စေပါသည်။ကြမ်းပြင် များကို အမြဲ သန့် ရှင်း လှပစေ ရန်နှင့် ချေးချွတ်ဆေး ပြီးပျော့ပျောင်းသော ဆပ်ပြာတို့ ကို သာသုံးစွဲ ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါ့ပြင် မာကျောခိုင်မာသော မျက်နှာပြင်ကို လုံခြုံ စွာ အုပ်ထားသောကြောင့် စွန်းထင်းခြင်းများကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး တင်းကြပ်စွာ ပိတ်ထားသည့် စနစ်ကြောင့် ဖုန်မှု့ န့် များ နှင့် အညစ်ကြေးများကို ချုပ်ရိုးကြောင်း အတွင်း ဝင်ရောက်ခြင်းကို လည်းကာကွယ် ပေးပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် အလွယ်တကူ T -Lock နှင့် (2-Lock ) စနစ်ကြောင့် တပ်ဆင်ချိန် အချိန်တိုတို အတွင်း ပြီးစီး နိုင်သကဲ့သို့အလွယ် တကူ ဖြုတ်နိုင် ၊ပြောင်းရွေ့ နိုင်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် Laminate Floor ကြမ်းခင်းအမျိုးစားဖြစ်သည့် Tobacco Sherwood Oak Laminate Flooring ကိုဝယ်ယူအသုံးပြု လိုပါက Thamasanda ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် နိုင်ပါသည်။
SMART ကွန်ကရစ်နံရံသည် ကြိုတင်သွန်းလောင်းထားသော ကွန်ကရစ် နံရံအချပ်ဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် တည်ဆောက်မှုလွယ်ကူ မြန်ဆန်စေရန် အတွက် အထူးဒီဇိုင်း လုပ်ထားပါသည်။ အဆောက်အဦး အမျိုးမျိုး၏ အတွင်းနံရံ၊ အပြင်နံရံ၊ ခြံစည်းရိုးနံရံများတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ကွန်ကရစ် အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပြီး လွယ်ကူ မြန်ဆန်စွာ တပ်ဆင်နိုင်သည့်အတွက် ဆောက်လုပ်စရိတ် နှင့် အချိန် သက်သာစေပြီး အုတ်နံရံများနေရာတွင် အစားထိုး အသုံးပြုရန် အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ 	လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အုတ်၊သဲ စသည်တို့အတွက်နေရာပေးရခြင်း၊ အလေအလွင့်များခြင်း၊ အကြိမ်ကြိမ်သယ်ရခြင်း၊ သန်.ရှင်းရေး အကြိမ်ကြိမ် ပြုလုပ်ရခြင်း အချိန်အကြာကြီး စီရ၊ ချောရခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သား ရှားပါးခြင်း၊ အရည်အသွေး ထိန်းရန် ခက်ခဲခြင်း စသည့် အုတ်စီချော ဒုက္ခ တွေကို ကုစားဖို့ 	ရိုးရှင်းလွယ်ကူ၊ စားရိတ် သက်သာ၊ အရည်အသွေး ကောင်းကောင်း၊ အချိန်ကုန်သက်သာပြီး မြန်မြန်ဆန်ဆန် တည်ဆောက် နိုင်မည့် အသင့်ပြုလုပ်ပြီး ကွန်ကရစ် နံရံ အချပ် 	အတွင်းနံရံ၊ အပြင်နံရံ၊ ခြံစည်းရိုးနံရံ စသည့် နံရံ အားလုံးရဲ့ အဖြေ 	သမရိုးကျ နံရံတွေကို အစားထိုးအသုံးပြုနိုင်မည့် မြန်၊ ကောင်း၊ သက်သာ စေမည့် နည်းပညာသစ်များကို SMART Concrete Products Co., Ltd မှ မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ အရည်အသွေး၊ ခိုင်ခံမှု၊ ရေမစိမ့်နိုင်မှု၊ မီးဒဏ်ခံနိုင်မှု၊ အသံလုံခြင်း တို့အတွက် အာမခံ စနစ်ဖြင့် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက် ပေးနေပါပြီ။ လူကြီးမင်း၏ တန်ဖိုးရှိလှသော အဆောက်အဦး နံရံတွေ စိတ်ချ လုံခြုံဖို့ SMART Concrete Products Co., Ltd နဲ့ ဆက်သွယ်ကြပါစို့။ “ နံရံတိုင်း အတွက် အားထားရာ SMART Concrete Wall ပါ။ “ “Trusty wall is Smart Concrete Wall”
Tilemaster ဆိုသည်မှာ နံရံကပ်ကြွေပြားများ မြဲမြံစွာ ခိုင်ခံလှပစေဖို့ အတွက် ကောင်းမွန်တဲ့ ဘိလပ်မြေ အမျိူးအစား တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင် အတွက် လုံခြုံစိတ်ချရပြီး ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်အောင် နောက်ဆုံးပေါ် Europen Standard စံချိန်စံညွန်းနဲ့ အညီ ထုပ်လုပ်ထားသော ဘိလပ်မြေတစ်မျိူးဖြစ်သည်။ ရရှိနိုင်သော အရောင်မှာ မီးခိုးရောင် နှင့် အဖြူရောင်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
လှပဆန်းသစ်သော Wallpaper များ
ဒီဇိုင်းဆန်းပြီး လှပသေသပ်သော Wallpaper များကို သင့်အိမ် နှင့် အခန်းများ အလှဆင်ဖို့အတွက် စဉ်းစားရခက်နေပါသလား။တည်ကြည်သော အရောင် နှင့် ဆန်းသစ်လှပသော ဒီဇိုင်းများဖြင့် ရေးဆွဲပုံဖော်ထားသော wallpaper များကို ကျွန်တော်တို့ Lamex Wallcovering မှ ထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးလျက်ရှိသည်။များသော အားဖြင့် မိန်းကလေးများ အကြိုက်တွေ့ နှစ်သက်စေမည့် ဒီဇိုင်းအမျိူးအစား တစ်ခုဖြစ်သည်။သိမ်မွေ့ နူးညံသော အရောင်ကို အခြေခံပြီး အပေါ်မှ ပန်းပွင့် နှင့် ပန်းခက်များကို ဆန်းသစ်လှပအောင် ပုံဖော်ထားသောကြောင့် မြင်လိုက်တာနဲ့ စိတ်ကြည်နူးလန်းဆန်း စေမှာ အသေချာပင်ဖြစ်သည်။တပ်ဆင်ရ လွယ်ကူပြီး အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းသက်သာကာ သင့်အိမ်ကို စိတ်ကြိုက်အလှဆင် ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ဖြုတ်ရလွယ်ကူပြီး သယ်ယူ ရွေ့ပြောင်းရ လွယ်ကူသောကြောင့် အသုံးပြုရ အဆင်ပြေစေသည်။အရောင်သွေး စုံစုံလင်လင် နှင့် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်၍ သင့်စိတ်ကူးအိပ်မက်များကို လက်တွေ့အကောင်ထည်ဖော်နိုင်ပါပြီ။မလေးရှား နိုင်ငံမှခေတ်မှီ နည်းပညာများဖြင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားပြီး တိုက်ရိုက်တင်သွင်းရောင်းချမှုကြောင့် အရည်အသွေးကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်သည်။
Light Weight Make of Glass Fibers Sound Insulation Fire Resistance
Thamasanda ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် အိမ် ၊ အဆောက်အဦး ၊ ရုံးခန်းများ နှင့် ဆိုင်များ တွင် ကြာရှည် အသုံးခံပြီး အရည်သွေးကောင်းမွန်ပြီး အကြမ်းခံသော Laminate Flooring များကို ဂျာမနီ နိုင်ငံမှ တင်သွင်း ပြီး ရောင်းချ လျက်ရှိပါသည်။ ၄င်း Laminate Flooring များသည် အလွှာလေးလွှာ ဖြင့် ဖွဲ့ စည်းထား ပြီး ပထမဦးဆုံး အလွှာသည် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ ခံနိုင်မှု့ ကို အလွန်အမင်း အကျိုးပြု ပါသည်။ ၄င်း Laminate Floor သည် ၈၄ % သစ်သားြ ဖင့်ပြုလုပ်ထား ပြီး သဘာဝ အပူ ချိန်အတိုင်းအတာဖြင့်ထုတ်လုပ် ထားသောကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အတွက် သက်သောင့် သက်သာ ရှိပြီး နွေးထွေး ဇိမ်ကျ စေပါသည်။ကြမ်းပြင် များကို အမြဲ သန့် ရှင်း လှပစေ ရန်နှင့် ချေးချွတ်ဆေး ပြီးပျော့ပျောင်းသော ဆပ်ပြာတို့ ကို သာသုံးစွဲ ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဒါ့ပြင် မာကျောခိုင်မာသော မျက်နှာပြင်ကို လုံခြုံ စွာ အုပ်ထားသောကြောင့် စွန်းထင်းခြင်းများကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး တင်းကြပ်စွာ ပိတ်ထားသည့် စနစ်ကြောင့် ဖုန်မှု့ န့် များ နှင့် အညစ်ကြေးများကို ချုပ်ရိုးကြောင်း အတွင်း ဝင်ရောက်ခြင်းကို လည်းကာကွယ် ပေးပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် အလွယ်တကူ T -Lock နှင့် (2-Lock ) စနစ်ကြောင့် တပ်ဆင်ချိန် အချိန်တိုတို အတွင်း ပြီးစီး နိုင်သကဲ့သို့အလွယ် တကူ ဖြုတ်နိုင် ၊ပြောင်းရွေ့ နိုင်ပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် Laminate Floor ကြမ်းခင်းအမျိုးစားဖြစ်သည့် Forest Oak Cloud Laminate Flooring ကိုဝယ်ယူအသုံးပြု လိုပါက Thamasanda ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် နိုင်ပါသည်။
ဘိလပ်မြေအခြေခံအချောကိုင်မှုန့်(SKIMPLAS ECO)
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဆေးသုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့မ်ိတ်ဆွေများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီး ဈေးနှုန်းကလဲ သက်သာ နံရံအချောကိုင်နိုင်သော skim coat လေးနဲ့ မ်ိတ်ဆက်ပေးပါရစေ DAVCO SKIMPLAS ECO ဟာ အကြမ်းခံပြီး ချောမွှတ်သောမျက်နှာပြင်ကိုဖန်တီးပေးပါသည်။ ကပ်အားကောင်းမွန်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်ပဲ လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ မည်သည့် အရာမှထပ်မံရောစပ်စရာမလိုပဲ ရေနှင့် ရောစပ်ကာ အသုံးပြူနိုင်ပါသည်။ အဖြူရောင် နှင့် မီးခိုးရောင်နှစ်မျိုးရရှိနိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ဝယ်ယူလိုပါက တိုက် C-1 အခန်း ၁၀၃ နှင်းဆီလမ်း ယုဇန HIGHWAY COMPLEX ကမာရွတ်မြို့ နယ် ရန်ကုန်မြို့ ဖုန်း ၀၉-၂၆၂၇၆၄၅၀၅ ကိုဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဘိလပ်မြေအခြေခံအချောကိုင်မှုန့် ။ အကြမ်းခံပြီးချောမွေ့သောမျက်နှာပြင်ကို ဖန်တီးပေးသော ဘိလပ်မြေအခြေခံအချောကိုင်မှုန့် ဖြစ်ပါသည်။ ရေတစ်မျိုးသာရောစပ်ရန်လိုအပ်ပြီးမျက်နှာကြက်ပိုင်းနှင့်နံရံပိုင်းနေရာစုံအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ၁မီလီမီတာ အထူဖြင့် 20meter square အသုံးပြူနိုင်ခြင်းကြောင့် ၁၀ ပေ နှစ်ကျင်း ကျော်ကျော် သုံးနိုင်ခြင်း။ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် သဟဇာတ ဖြစ်စေပြီး အသုံးပြုသူနှင့် နေထိုင်သူများ အား ထိခိုက်မှူ မရှိစေနိုင်ခြင်း၊ Singapore နိုင်ငံတွင် Green Label ရရှိထားသော Product ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြူ နိုင်ပါသည်။ ဈေးနှုန်းချိူသာပြီး Brand ကောင်းကောင်းကိုသုံးချင်တဲ့ Customer တွေအတွက် အထူးသင့်တော်တဲ့ product များပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကျိုးရလဒ် -	ပတ်ဝန်းကျင်မထိခိုက်ခြင်း၊ အဆိပ်မဖြစ်စေခြင်း။ -	အအက်အကွဲကို ဖုံးပိတ်သွားခြင်း။ -	ကပ်အားကောင်းခြင်း။ -	မီးခိုးရောင်နှင့်အဖြူရောင်ရနိုင်ခြင်း။ ရောနှောရန်အချိုး -	ဆေးမှုန့် 25kg အိတ် (၁)အိတ်လျှင်ရေ 7.5-8.25 လီတာရောရမည်။ -	ရေကိုမွှေဇယားထဲအရင်ထည့်ပြီးမှ ဆေးမှုန့် ထည့်ကာ 3-5 မိနစ်မွှေပေးရမည်။ အသုံးချရန်အထူ -	ပတ်တီး(၁)လွှာလျှင် 3-5mm အထူထိသာ သုတ်ရပါမည်။ -	ပထမအောက်ခံလွှာခြောက်မှ ဒုတိယအလွှာသုတ်ရပါမည်။ အသုံးပြုနိုင်သော ပမာဏ -	25kg အိတ်(၁)အိတ်လျှင် 1mm အထူဖြင့် 17.5-20m² အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Tilefix-PD ဆိုသည်မှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းရာသီဥတု နှင့် လျော်ညီအောင် အထူးပြုလုပ် ထားသော ဘိလပ်မြေ တစ်မျိူးဖြစ်ပါသည်။အသုံးပြုရလွယ်ကူ ချောမွေ့စေရန် ရေနှင့်ရောစပ် ပြီး နောက်ဆုံးတွင် အခြောက်ခံပေးရသည်။ရရှိနိုင်သော အရောင်များမှာ အဖြူရောင်နှင့် မီးခိုးရောင် တို့ဖြစ်ပါသည်။